IApartment eSleek Waterfront kuManzi amabini - I-Airbnb
IApartment eSleek Waterfront kuManzi amabini
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguTracy
Ichazwa ngokudityaniswa kwemibala ethunyiweyo kunye neziqwenga zokuhombisa zejometri, le ndlu iphantsi inesitayile esilungelelanisiweyo esikhuthaza umoya wokuzola. Ipatio yomgangatho ogqunyiweyo imema indawo efanelekileyo yokusingatha ibarbeque, igcwele imbono yechibi.
“Ngokoqobo "indawo yethu eyonwabileyo" kunye nekhaya kude nekhaya. Yonke into apha ukwenza ikhefu elimangalisayo! Ndiyathemba ukuba iindwendwe zethu zizonwabele njengoko sisenza!”
- Tracy, umbuki zindwendwe wakho
I-Queen bed, I-TV, Izinto ezifakwa efestileni zokwenza indlu ibe mnyama, Umatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu
4.90 (iingxelo zokuhlola 160)
Ibekwe ngaphakathi kweTwin Waters Resort, indawo yokuhlala ibekwe ecaleni koMlambo iMaroochy. Kukude nezinyuko ukusuka kwibala legalufa kunye nolwandle, kunye nendawo yolondolozo. Iindawo zokutyela kunye nobomi basebusuku edolophini kukumgama omfutshane. Ukufikelela ngokupheleleyo kwiindawo ekuchithelwa kuzo iiholide.
Umgama ukusuka eSunshine Coast Airport
imizuzu eyi-8 ngemoto xa indlela ingaxakekanga
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Twin Waters